Tan iyo sidii loo Ceyriyay Jose Mourinho, ma jiro Laacib ka ciyaara Premier League oo Paul Pogba….!!! – Gool FM
Tan iyo sidii loo Ceyriyay Jose Mourinho, ma jiro Laacib ka ciyaara Premier League oo Paul Pogba….!!!
Byare January 14, 2019
(Manchester) 14 Jan 2019. Tan iyo sidii kooxda Manchester United looga ceyriyay Jose Mourinho isla markaana xilka si ku meel gaar ah loogu dhiibay Ole Gunnar Solskjær ma jiro laacib ka ciyaara Premier League oo ku lug leh goolal ka badan Paul Pogba.
Xiddiga reer France ayaa kubbad cajiib ah xalay farta ka saaray Rashford kaa oo isna si caqliyaysan u dhammeystiray.
Haddaba caawintaas ayaa ka dhigan in Pogba uu ku lug leeyahay goolasha ugu badan Premier League tan iyo sidii loo ceyriyay Mourinho.
Afar gool ayuu dhaliyay afarna wuu caawiyay.
Safka ay Caawa ku soo gali karto Manchester City iyo waliba Saacada la daawan doono
Dybala oo la hor-dhigay inuu kala Doorto xiddiga ay isku XULKA yihiin ee Messi iyo kan ay isku KOOXDA yihiin ee Ronaldo!!....(Yuu u Codeeyay??)